ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ကောလဟာလတွေကို အများယောင်တိုင်း လိုက်မယောင်ဖို့ ဦးကျော်သူ ပြော (ရုပ်သံ)
ကောလဟာလတွေကို အများယောင်တိုင်း လိုက်မယောင်ဖို့ ဦးကျော်သူ ပြော (ရုပ်သံ)
Time မဂ္ဂဇင်းရဲ့ “The Face of Buddhist Terror”
နဲ.ပါတ်သက် လို.ပြောချင်တယ် ။
.. ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုစော်ကားလိုက်တာပါ ။
မြန်မာပြည်မှာ active ဖြစ်ပြီး လှုပ်ရှား ၊ ဟောကြားနေ
တဲ.ဆရာတော်တွေအများကြီးရှိသလို ၊ တိုင်းပြည်မှာဘာတွေဖြစ်ဖြစ် အစိုးရ အလိုအတိုင်း
(အဆောင်အယောင်အပြည်.နဲ.) မှိန်း လိုက်နေတဲ.ဆရာတော်တွေလည်းရှိပါတယ် ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရခိုင်ကစတဲ. မငြိမ်မသက်မှုတွေမှာ ဘာသာ
၂ ခုကြားမခံမရပ်နိုင် ဟောကြားသတိပေးတာတွေ ဘာသာ
၂ ခုစလုံးမှာရှိပါတယ် ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆရာတော်တွေ ကအပြင်မှာ ဗြောင် ဟောပြီး
အခွေတွေ ထုတ်နေပေမယ်. အစ္စလမ် တွေကလည်း
ဗလီတွေအတွင်း ပက်ပက်စက်စက် ဟောကြတာပါ ။
(ရန်ကုန်မှာ ဖြစ်လာရင် equal damage = 50%/50%
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆရာတော်တွေ မှပြည်သူတွေကိုဟောကြား
ရာမှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ. နူးညံ.သိမ်မွေ.မှု ၊ အကြင်နာ
တရားတို.ကနေ လွတ်ထွက်သွားတာမျိုးလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်တာပါ ။
... ဆိုလိုတာကတော. TIME မဂ္ဂဇင်း အနေနဲ. ဝေဖန်
ချင်ရင် ဘယ်ဆရာတော်တွေ လှုံဆော်လို.အကြမ်းဖက်
မှုတွေဖြစ်တယ် ၊ ဘယ်နေရာမှာဘယ်နေ.က ဘာတွေဟောတာ ထောက်ပြကန်.ကွက်လို.ရပါတယ် ။
ဗုဒ္ဓဘာသာတရား ကိုမထိခိုက်စေသင်.ပါဘူး ။
မနှစ်က မောင်းတောမှာ ဗလီဆရာတွေရဲ.လှုံ.ဆော်မှု ၊ အမိန်.ပေးမှု တွေ
ကြောင်. ဗလီကထွက်ထွက်လာချင်း တွေ.တဲ.ရခိုင်တွေ
အကုန်သတ် ၊ အိမ်တွေမီးရှို. လုပ်ခဲ.တာပါ ။
မြန်မာပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော် မှာ ဘယ်အခြေ
အနေဘဲဖြစ်ဖြစ် ... သူတပါးကို သတ်ကြ လို.ဘယ်တော.မှမဟောကြား ခဲ.သလိုနောင်လည်း ဟောကြား မှာမဟုတ်တာ
TIME မဂ္ဂဇင်း သိသင်.ပါတယ် ။